Uchishandisa Inopindirana Midhiya Kukurudzira yako B2C Kukwidziridzwa | Martech Zone
China, June 16, 2016 China, June 16, 2016 Muhammad Yasin
Hazvina mhosva kuti uri maindasitiri api, kana bhizinesi rako riri muchikamu cheB2C, mikana yakanaka chaizvo kuti uri kutarisana nemakwikwi anotyisa - kunyanya kana uri chitoro chezvitinha nedhaka. Mushure mezvose, iwe unoziva kuwanda uye kangani vatengi vanotenga pamhepo mazuva ano. Vafudzi vachiri kuenda kuzvitina & mumatope zvitoro; asi mukana wekutenga pamhepo waita kuti huwandu hwevachengeti vemu-chitoro udonhe. Imwe yemaitiro mabhizinesi ari kuyedza kugadzirisa izvi kuri nekumhanyisa kukwidziridzwa - yemakoponi, kutsva kweinowanikwa, kuderedzwa kukuru, nezvimwe. Zvakare hazvo, ivo vakwikwidzi vamwe vatakakurukura vari kumhanyisa kukwidziridza izvo zviri kungokwezva…. kana zvisiri zvinokwezva kupfuura zvako.
Mazuva ano, kukwidziridzwa kunoitwa nemabhizinesi hakuna kukwana kutyaira mu-chitoro traffic kana kunyange kutenga pamhepo. Vanokwikwidza vako vanogona kunge vachimhanyisa kukwidziridzwa kwakafanana newe - dzimwe nguva panguva imwe chete. Izvo zvakati, vatengi vazhinji vari kuzoshandisa "zvirinyore" sechisarudzo chekuenda kana kwete kuenda nekwawakagadzwa: kuvimbika kunobva pakuongorora kwepamhepo, padhuze nepamba pako (kana chidhinha & chitoro chevhu), kurudziro kubva kushamwari ( kunzvenga tsvagiridzo) uye ruzivo (nezvakataurwa musangano) ndizvo zvakajairika kusarudza zvinhu. Muchidimbu, kukwidziridzwa kwako kunofanira kumira.
Kuti kukwidziridzwa kwechiratidzo chako kuve pachena, iwe zviri pachena kwazvo unofanirwa kuita chimwe chakasiyana. Imwe yedzakanakisa nzira dzekuita izvi nekubatanidza zviitiko zvekudyidzana pawebhusaiti yechako. Zvekudyidzana zviitiko zvakakosha nekuti zvinobvumidza mabhureki mukana wekupa nhungamiro nezvakakosha, kana BIG kutenga sarudzo. Iyo zvakare inopa mabhenji mukana wekunakidza vatengi vavo. Heano mamwe sarudzo yezviitiko zvekudyidzana zvaunogona kusanganisa muwebhusaiti yako kuti uwedzere kubatanidzwa, uye pakupedzisira, kusimudzira shanduko.
Kune mabhizinesi anotengesa zvigadzirwa "zvakawandisa" uye masevhisi ayo anowanzoda kufunga kwakanyanya (mota, fanicha, zvikwereti, nezvimwewo), macalculator chikamu chakakura chezvinhu zvinofambidzana zvinogona kuendesa vatengi vako kuzvisarudzo zvekutenga zvakanaka. Kazhinji nguva, kunyangwe ivo vatengi vane mari uye vakagadzikana vanoda kutora nhanho kumashure kuti vaone zvavanogona uye zvavanotadza kuwana. Mamwe macalculator akajairika atinoona ndeaya: MaCalculator ekubhadhara pamwedzi pamwedzi, macalculator emubereko uye macalculator ekubhadhara.
Ehezve, zvemari handiyo yega chikonzero chekuda Calculator. Vatengi vako vangangoda kuverenga kuti ingani nzvimbo yavanowana pasofa nyowani. Kana, vatengi vako vangangoda kuverenga miviri yavo, kana huremu hwavo, kuti vaone kuti chirongwa chakakodzera sei kwavari. Iyo poindi apa ndeyekuti macalculator anoita kuita sarudzo kuve nyore, nekuti ivo vari kupa huwandu hwenhamba kune mamwe misiyano. Iyo iri nani iyo nhamba (ingave yakakwira kana yakaderera), iri nani nguva mutengi ari kuwana mhinduro yavo - uye izvo zvinowanzo kutungamira kune dzakawedzera vavariro dzekutenga.
Ma Calculator anogona kuratidza kuve anobatsira zvakanyanya kune vatengi vari kutsvaga kutora chikamu mune yako yazvino kusimudzira. Kunyangwe macalculator achigona kushandiswa chero nguva, kugona kuwana mhinduro dzemibvunzo yakakosha kunovasundira pasi fanera yekutenga. Kunyanya pavanoziva nezve avo chaiwo mamiriro, ivo vanonyanya kufarira ivo kutenga. Uye kana paine kukwidziridzwa kuri kuitika (ngatiti, "Hapana Kubhadharwa Kusvikira 2017"), mutengi ari kuzama kuverenga izvo zvavanogona kuwana mune ramangwana vasati vazvipira kwakadaro. Kana vangowana mhinduro yavo, vanobva vatenga.
Dzimwe nguva kushomeka kwemutengi hakuna hukama nemari (kana imwe kuverenga); asi asi, yakachena sarudzo. Kana vatengi vakaunzwa nemhando zhinji yesarudzo huru (inonyanya kuitika panguva yekusimudzira), dzimwe nguva vanodzorwa nekugona kusarudza. Zvinonzwika kunge zvakapusa, asi ichokwadi chose. Vamwe vatengi vanozongorega kana vasingakwanise kuuya kuchisarudzo chekutenga - kunyanya kana chiri chikuru kutenga. Kana mutengi asina kunyatsogadzika pane chimwe chinhu, pfungwa yavo ndeyekuti "Zvakanaka, haifanire kunge iri huru ipapo. Sei ndichizoshandisa mari yakawandisa kana ndiri pafenzi? ” uyezve vanoenderera mberi.
Zvekuongorora zviitiko ndeimwe nzira huru yekuita kuti vatengi vako vapfuurire pasi pekutenga fanera - kunyanya kana zvasvika pakusimudzira kwako kwepamhepo. Nekuti kukwidziridzwa kunowanzo kuve nesarudzo chaiyo yezvigadzirwa, masevhisi kana zvinopihwa, ongororo inogona kunongedza vatengi kune imwe yesarudzo dziripo.
Ngatishandise auto mapoka semuenzaniso. Sezvo iwe ungangove uchiziva, auto mapoka ane akati wandei madhiri ekutengesa mune imwe nharaunda; uye yega yekutengesa kazhinji inotengesa mhando imwe yemota (Toyota, Kia, Hyundai, nezvimwewo). Ngatitii mutengi anzwa zvinhu zvakanaka nezve ino auto boka; uye zvese zvekutengesa (mune auto boka) vari kutora chikamu mune "Hapana Kubhadhara kusvika muna 2017" kukwidziridzwa. Zvese zvinonzwika zvakanaka uye zvakanaka… kusvikira iwe waona kuti mutengi haana chokwadi zvachose nezve chii chinogadzira / modhi yemota yavanoda kuenda nayo. Kuti mutengi iyeye arege kuenda kune imwe nzvimbo yekutengesa, iro auto boka rinogona kuisa ongororo pawebhusaiti yavo kuti ivatungamirire kuenda kusarudzo yekutenga. Rudzi rwakanaka rwekuongorora runogona kuve rwunopa "gadzira / modhi" mutengi zvichibva pamhinduro dzinopihwa nemutengi - "ndeipi mota yaunofanira kutyaira?" kuongorora.
Imwe nzira huru yekukwidziridza zviitiko zvekudyidzana mukusimudzira kwako ndekuita KUTI chiitiko chako chinobatanidza CHIITWE mukusimudzira. Kunyangwe zvii zvimwe zvekutengesa zvauri kuenda, unogona kukurudzira vatengi kuti vashanyire chitoro chako (kana webhusaiti) neiyo Instant Win mutambo - uchipa mukana wekuhwina mubairo weBIG, uye nekupa zvipo kana nyaradzo mibairo kune vanhu vasina kuhwina jackpot. Izvi zviitiko zvinogona kuve ne: digital slot michina, kutenderera-kuhwina mavhiri (se Wheel ye Fortune) kana chimwe chiitiko chakasarudzika chinotora mumwe, mukuru-mubairo muhwina. Iyo mimwe mibairo kana kupihwa (uko kunogona kutaurwa pamberi pekutora chikamu) chingave chinhu chakakosha senge kubvunzana mahara, hapana kubhadhara kwemwedzi, mari pasi, kana $ 100 kubva pakutengwa kwe $ 800 kana kudarika. Chikamu chakanakisa ndechekuti idzi mhando dzezviitiko dzinobata zvikuru, nekuti dzinosimudzira mufaro uye hazviwanzo kutungamira mukutsamwa kana kuvhiringidza vatengi. Ichokwadi chekuti ivo vari kunakidzwa uye ivo vari "kuhwina" chimwe chinhu chinoita ichi chimiro chakanakisa chekudyidzana chiitiko - zvinoenderana nemaindasitiri, hongu.
Yekupedzisira yekudyidzana chiitiko cherudzi ini chandichave kuenda pamusoro i "mibvunzo." Kunyangwe quizzes isingawanzo kupa chimwe chinhu chakakosha kukosha (nemutengo unooneka, ndinoreva mhinduro, kupihwa kana mubairo), vanogona kusiya vatengi vaine kunzwa kwekugutsikana. Kazhinji, kana vatengi vachinzwa kufara kana kuzvikudza ivo pachavo, vanoudza shamwari dzavo. Panyaya yemibvunzo (muchimiro chekudyidzana chiitiko), vatengi vanozoda kugovana zvavanowana pasocial media - uye kunyange kuvadenha. Zvekare, kunyangwe pasina chekupa "chinobatika", aya marudzi ezviitiko anoshamisa ekumaka. Iyo inowedzera mibvunzo ichibata kuda kwevatengi, iyo inonyanya kuzivikanwa iyo mhando inova - uye ivo vanowedzera kuda kuziva ivo veiyo chiratidzo. Uye sekusvika pakukwidziridzwa, mibvunzo yaunobvunza pamubvunzo iwoyo inogona kuratidza dingindira rekusimudzirwa kwepamhepo - iyo inoenderera mberi ichibata kuda kwevatengi.
Ndeipi yeiyi ruzivo mhando dzingave dzinonyanya kubatsira kune rako bhizinesi? Tiudze mune zvakataurwa pazasi!
Tags: kushambadza zviitikokusangana kwevatengiContent Marketingzvinowirirana zvemukatiyekudyidzana midhiyaonline kukurudzira